Su'aal: Biyaha galo wadnaha maxaa keeno?
Author Topic: Su'aal: Biyaha galo wadnaha maxaa keeno? (Read 572 times)
« on: June 18, 2018, 05:03:22 PM »
Asc dhaqtar waxan raba inan ogado biyaha wadnaha galo maxaa keeno, sidee loo daweeya.
Re: Su'aal: Biyaha galo wadnaha maxaa keeno?
« Reply #1 on: January 04, 2019, 11:42:19 PM »
Biyaha waxay galaan galka wadnaha ku daboolan, waxaana cilladaas loo yaqaanaa "Pericardial Effusion", waxa ugu badan ee keeno waa caabuq ku dhaco galka wadnaha sida Tiibishada ama xanuunada roomaatiisamka qaar ka mid ah.
Waxaa lagu ogaan karaa in sawir wadnaha la saaro iyadoo la adegsanayo qalabka ECHO, mararka qaar wadnaha biyaha waa laga miiri karaa si baritaan loogu diro hadidi la fahmi waayo waxa keenay in biyo galaan galka wadnaha.
Views: 8933 July 02, 2017, 11:30:43 AM
Views: 53372 January 06, 2015, 08:30:19 PM
Views: 18599 December 05, 2015, 01:19:38 PM
Views: 19440 April 06, 2016, 04:35:38 PM
Views: 7961 June 11, 2017, 12:22:58 PM